ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို MTV အဖြစ် ပုံဖော်လိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ
MTV Teaser လေးမှာတင် ကြွေနေရပြီ။
အေသင်ချိုဆွေက သူမရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံတွေကို သီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်အဖြစ် ပုံဖော်ထားတဲ့ ‘’Never Give Up’’ ဆိုတဲ့ MTV Teaser လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Photo: A Then Cho Swe
အေသင်ချိုဆွေက ‘’Never Give Up’’ ဆိုတဲ့ MTV Teaser အသစ်လေးကို ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မိတ်ဆက်ပေးလိုကက်ပြီးနောက် ၁၂ နာရီအတွင်းမှာပဲ အားပေးကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်ပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
‘’ATHENCHOSWE " NEVER GIVE UP " MV Teaser ! မင်္ဂလာပါ ... အေသင့်ရဲ့ ချစ်ရပါသော ပရိသတ်အားလုံး အတွက် နှစ်ဟောင်းမှာ ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဓာတ် ကျစရာတွေ , စိတ်ညစ်စရာတွေ , ဘဝအခက်အခဲတွေ လောကဓံမျိုးစုံအဖုံဖုံတို့အတွက် အခုလို နှစ်ဟောင်းအကုန် နှစ်သစ်ကူးကာလလေးမှာ အေသင်ချစ်ရတဲ့ဂီတနဲ့ #NeverGiveUp (ဘယ်သောအခါမှ_အရှုံးမပေးနဲ့)ဆိုတဲ့ Messageလေးနဲ့အတူ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကို ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်’’ ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့ည ၁၀နာရီကျော်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်မှာ MTV လေးနဲ့အတူ စာရေးထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီသီချင်းလေးကတော့ သူမရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှု အတွေ့အကြုံတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ MTV တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ အေသင်ချိုဆွေက ပြောပြထားပါသေးတယ်။ MTV အပြည့်အစုံကိုတော့ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ကျရင် သူမရဲ့ ပေ့ချ်မှာ တင်ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’အေသင် တကယ်ကို ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ True_Story အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကိုပါ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာမို့ #Never_GiveUpလို့ အမည်ပေးထားတဲ့သီချင်းအသစ်လေးရဲ့ Teaserကိုလည်း ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။ လာမယ့် #Aprilလ_26ရက်နေ့ ညနေ၆နာရီတိတိမှာတော့ "Never Give Up" သီချင်းအတွက် Music_Video အပြည့် အစုံ (Full_Version) ကို အေသင့်ရဲ့ Official_Page ကနေပဲ လွှင့်တင်ပေးသွားမှာပါ The Full Version of " Never_Give_Up " MV will be uploaded on #April_26 at 6PM Stay Tuned ! #NeverGiveUp #SingleMom #AthenChoSwe #Team_Athen #StayStrong’’ လို့လည်း အားပေးစကား ဆက်လက် ပြောထားပါသေးတယ်။
အနုပညာလောကထဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေက ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ "အသည်းကွဲသီချင်း တွေမဆိုတော့ဘူး" ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်လေးကို ပရိသတ်လက်ထဲ အရောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာအလုပ်တွေ ပိုပြီးလုပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ သူမရဲ့ သီချင်းအသစ်တွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
အေသင်ချိုဆွေကို ‘’ပေါက်တဲ့အိုး’’ ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အခွေ ကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ သိတင်သိရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် ‘’ အနီးဆုံးလူ’’ ဆိုတဲ့ ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ဂီတအလုပ်တွေသာမက သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ခဏတာ ဝေးကွာသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစပြီး ဂီတလောကထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။